Gelugpa छ तिब्बती बौद्ध धर्म को भाग
दलाई लामा स्कूल
Gelugpa उनको पवित्रता दलित लामा संग सम्बन्धित तिब्बती बौद्ध धर्म को स्कूल को रूप मा पश्चिमी मा जानिन्छ। 17 औं शताब्दीमा तिब्बत (गिलाकलाई पनि भनिन्छ) तिब्बतमा सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था बनेको थियो र यो चीनले तिब्बतीको 1 99 1 मा नियन्त्रणमा लिएको छ।
Gelugpa की कहानी Tsongkhapa (1357-14 1 9), एक आम आदमी के एक आदमी के साथ शुरू हुआ जो एक बहुत युवा उम्र में एक स्थानीय Sakya लामा के साथ पढ़ना शुरू किया।
16 मा उनले केन्द्रीय तिब्बत भ्रमण गरे, जहाँ उनीहरूको शिक्षालाई अझ धेरै प्रसिद्ध शिक्षकहरू र मठहरू अवस्थित थिए।
चिन्ताभुपाले कुनै पनि ठाउँमा अध्ययन गरेन। उनले तिब्बती औषधी, महामुद्रका प्रथाहरू र अटशाका तंत्र योगबारे कोगू मठहरूमाथि बसिरहेका थिए। उनले दर्शनले सक्याका मठहरूमाथि अध्ययन गरे। उनले स्वतन्त्र शिक्षकहरूलाई ताजा विचारहरू खोजे। उहाँ विशेषगरी नगार्जुना को मध्यामिका शिक्षामा रुचि राख्नुहुन्थ्यो।
समयमा, तान्जूखापले यी शिक्षाहरूलाई बौद्ध धर्मको नयाँ दृष्टिकोणमा जोड दिए। उनले दुई प्रमुख कामहरुमा, आफ्नो मार्ग को चरणहरु को महान प्रदर्शन र गोपनीय मंत्र को महान प्रदर्शन मा आफ्नो दृष्टिकोण को वर्णन गरे। तिनका अन्य शिक्षाहरू धेरै मात्रामा, 18 मा सबै एकत्रित गरियो।
उनको अधिकांश वयस्क जीवनको माध्यमबाट, तान्साखाप तिब्बतको भ्रमणमा गएका थिए, प्रायः दर्जनौं विद्यार्थीहरु संग शिविरहरुमा बस्छन्। समय Tsongkhapa आफ्नो 50 को दशक पुग्यो थियो बाली जीवनशैलीले उनको स्वास्थ्यमा एक टोल लगाएको थियो।
तिनका प्रशंसकहरूले उनलाई लुसासा नजिकै पर्वतमा एउटा नयाँ मठ निर्माण गरे। मठ नाम "गांधेन" नाम दिइएको थियो जसको अर्थ "आनन्दित"। तथापि, मंगलबार मृत्यु भएको पहिल्यै तान्जूखापमा बसोबास गर्दै थिए।
Gelugpa को स्थापित
उनको मृत्युको समयमा, त्सगञ्जप र उनका विद्यार्थीहरू Sakya विद्यालयको भाग मानिन्छ।
त्यसपछि उहाँका चेलाहरू माथि उठाइरहेका थिए र तान्साखापका शिक्षाहरूमा तिब्बती बौद्ध धर्मको नयाँ विद्यालय निर्माण गरे। तिनीहरूले स्कूल "Gelug," भनिन्, जुन "virtuous tradition।" यहाँ केहि चीङ्गगापका सबैभन्दा प्रमुख चेलाहरू छन्:
ग्यित्स्याब (1364-1431) सोचेको छ कि पहिलो पटक गन्डिन्सनको ज्यान गएको छ जसको पछि लागेन। यसले उसलाई पहिलो गाण्डेन ट्रिपा बनायो, वा गिन्डुनको सिंहासन-धारक बनायो। यस दिन गांधी ट्रिपा जेलग विद्यालयको वास्तविक, आधिकारिक प्रमुख होइन, दलाई लामा होइन।
जमचिन चोजी (1355-1435) ले लोसा को महान सीरा मठ स्थापना गरे।
तिब्बतमा चिन्तापापाका शिक्षाहरूको रक्षा र प्रचारका साथ कुद्रब (1385-1438) लाई श्रेय दिइएको छ। उनले जेलगारीको उच्च लामाहरूको पहेंलो पहेंलो पहेंलो पहेंलो लगाएकी छिन्, जसलाई सुके लामा, जसले लाल टोपी लगाए।
Gendun Drupa (1391-1474) Drepung र Tashillunpo को महान मठहरुलाई स्थापित गरे, र उनको जीवन को समयमा तिब्बत को सबै भन्दा सम्मानित विद्वानहरु थिए।
गन्डन ड्युपाको मृत्यु भएको केही वर्ष पछि, केन्द्रीय तिब्बतीको एक जना केटा उनको ट्युलु , वा पुनरुत्थानको रूपमा चिनिन्थ्यो। अन्ततः, यो केटा, गडेन गितोतो (1475-1542) Drepung, Tashillunpo, र सेरा को बाबाको रूपमा सेवा गर्नेछन्।
सोनम गेटोसो (1543-1588) गेन्डन गितोतोको पुनरुत्थानको रूपमा मान्यता प्राप्त गरिएको थियो।
यो टुल्लान अल्टान खान नामक एक मंगोल नेतालाई आध्यात्मिक सल्लाहकार बन्नुभयो। Altan Khan Gendun Gyatso "Dalai Lama" शीर्षक "अर्थ को सागर।" सोनम गेटोसो तेस्रो दलाई लामा मानिन्छ। उनको पूर्ववर्ती गेन्डन ड्युपा र गिन्डुन गीतासो को नाम मा पहिलो तथा दोस्रो दलाई लामा को नाम मा राखयो।
यी पहिलो दलका लामाहरूसँग कुनै कुनै अख्तियार छैन। यो " लोभ पांचवां" दलाई लामा (1617-1682) लाई लोब्सग गेटोव थियो, जसले तिब्बतलाई पराजित गरे गौशी खानलाई अर्को मंगोल नेतासँग एक गहिरो गठबन्धन गरे। गौशी खानले सम्पूर्ण तिब्बत जनताको राजनीतिक र आध्यात्मिक नेता लोब्सग गेटोओ गरे।
ठूलो पांचवाँको अधीनमा तिब्बती बौद्ध धर्मको अर्को विद्यालयको एक ठूलो भाग योनाङ्ग जेलगुपामा भर्ना गरिएको थियो। योनाङले प्रभावले कलचका शिक्षाहरू जेलगुपालाई थप्यो। ठूलो पचासले तिब्बतमा पोटला महलको निर्माण पनि शुरु गरे जुन तिब्बतको आध्यात्मिक र राजनैतिक प्राधिकरणको सिटमा रहेको थियो।
आज धेरै मानिसहरू सोचिरहेका छन् कि दलाई लामाले "तिब्बतमा" राजाको रूपमा पूर्ण शक्ति पाएका थिए तर त्यो गलत छ। दलित लामा जो महान पांचवाँ पछि आए, एक कारण वा अर्को को लागि, अधिकतर हेडहेडहेड जो साना सशक्त शक्तिहरु थिए। लामो समयको समयका लागि विभिन्न सन्दर्भ र सैन्य नेताहरू वास्तवमा चार्ज थिए।
13 औं दलाई लामा सम्म, थबुन्टेन गेटोसो (1876-1933), अर्को दलाई लामा सरकारको वास्तविक प्रमुखको रूपमा कार्य गर्थे र उनीहरूले तिब्बतीलाई ल्याउन चाहने सबै सुधारहरू लागू गर्न सीमित अधिकार थियो।
वर्तमान दलाई लामा 14 औं छ, उहाँको पवित्रता तान्जान गीतासो (1935 मा)। उनी 1950 मा तिब्बतमाथि आक्रमण गर्दा चीनमा अझै पनि एक किशोर थिए। उनको तिब्बत 1958 पछि तिब्बतबाट निर्वासित भएको छ। हाल हाल तिब्बतका जनजातिहरुमा लोकतान्त्रिक, निर्वाचित सरकारको पक्षमा सबै राजनीतिक शक्ति त्याग्नु भयो।
थप पढ्नुहोस्: " दला लामाहरूको सफलता "
गिलाग्पामा दोस्रो उच्चतम लामा प्यानचेन लामा छ। शीर्षक Panchen लामा, "महान विद्वान" को अर्थ को एक तिल्लु मा पांचवा द Dalai लामा को द्वारा प्रदान गरिएको थियो जो पुनर्निर्माण को वंश मा चौथी थियो, र यसैले त्यो चौथो पंचचेन लामा बन्यो।
वर्तमान पेंचेन लामा 11 औं छ। तथापि, उनको पवित्रता ग्द्दन चोकेय निमामा (जन्म 1988) र तिनको परिवारले 1 995मा उनको मान्यता सार्वजनिक गरेपछि केही समय पछि चिनियाँ हिरासतमा लिएको थियो। प्यानचेन लामा र उनको परिवार पछि देखिने छैनन्। बीजिन जी द्वारा नियुक्त गरिएको एक प्रिक्रेता , गलिट्ससेन नर्बु, उनको स्थानमा पीनचिन लामा को रूपमा सेवा गरेको छ।
थप पढ्नुहोस्: " चीनको अपमानजनक पुनरावृत्ति नीति "
1958 9मा लहासा विद्रोहको समयमा चीनी सेना द्वारा मूल गांधी मठ, जेलुपाको आध्यात्मिक घर नष्ट भयो। सांस्कृतिक क्रान्तिको दौडान, रेड गार्ड जो केहि छोडिदिए समाप्त भयो। तान्साखापका म्युम्मेटेड शरीर पनि जलाएको थियो, भिक्षु एक खोपड़ी र केही खरानी पुन: प्राप्त गर्न सक्षम थिए। चिनियाँ सरकारले मठ पुनर्निर्माण गर्दैछ।
यसबाहेक, निर्वासित लामाहरूले भारतको कर्नाटकमा गांधेन पुन: स्थापित गरे र यो मठ अहिले Gelugpa को आध्यात्मिक घर हो। हाल गांधी ट्रिपा, 102 औं, थम्बन Nyima Lungtok Tenzin Norbu। (गांधेन त्रिपुस तुलुकस होइन तर वयस्कहरूको रूपमा नियुक्त गरिन्छ।) जेलगुपा भिक्षु र ननहरूको नयाँ पीडाहरूको प्रशिक्षण जारी छ।
उनको पवित्रता 14 औं दलाई लामा 1958 मा तिब्बत छोडेर भारतबाट धर्मशालामा बस्न थालेको छ। उहाँले तिब्बतका लागि अझै पनि चीनी शासनको अधीन उच्च शिक्षा प्रदान गर्न र आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभएको छ।
परमेश्वरसित एक अंतरंग सम्बन्ध कसरी छ
क्यूई (ची): लाइफ फोर्सको ताओस्ट सिद्धान्त
कसरी परमेश्वरमा अधिक गोपनीय हुनुहोस्
बौद्ध धर्म मा सेलिबिया
9 नि: शुल्क र प्रभावकारी कक्षा पुरस्कारका लागि विद्यार्थीहरू
मोटरसाईकल कसरी धुने
एक सही अरबी
सबैभन्दा ठूलो निन्जा युद्ध, 1581
प्राय: साधारण प्लास्टिक
रसायन विज्ञानमा प्रणाली परिभाषा खोल्नुहोस्
के तपाईंको लागि स्नातक स्कूल हो?
अमेरिकी नागरिक युद्ध: मेजर जनरल जोसेफ हुकर
हाइब्रिड बैटरी लाइफ र प्रतिस्थापन लागत
10 स्टेजमा चल्ने ताराहरू
भगवान चर्च को गठबंधन इतिहास
किन लिसेस्टर सिटी फक्सहरूलाई बोलाइन्छ?
Beehive क्लस्टर पत्ता लगाउनुहोस्
के केहि पनि गति को गति भन्दा छिटो सार्न सक्छ?
प्रेरणात्मक शिक्षकहरूको बारेमा सर्वश्रेष्ठ चलचित्र
ब्रायन बिसिसन-ईटन: क्यानाडाको बहु-कार्यक्रम चैंपियन
डलास क्यूब्स प्लेऑफ इतिहास
बैलेटमा एक पुनरावृत्ति के हो?